मदनकृष्णले श्रीमती यशोदाको काजकिरिया १३ दिने नभई ५ दिने गर्ने ! - hamro Desh
मदनकृष्णले श्रीमती यशोदाको काजकिरिया १३ दिने नभई ५ दिने गर्ने !
काठमाडौं – वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी जीवन संगीनी यशोदा सुवेदीको सोमबार राती निधन भयो ।
सोमबार निधन भएकी यशोदाको मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो । यशोदाको निधनले कलाकार मदन कृष्णश्रेष्ठलाई मात्रै हैन मदनकृष्णका प्रशंसक र नेपाली सिनेमा उद्योग र सञ्चार जगतलाई नै स्तब्ध बनाएको छ ।
अन्त्येष्टिका बेला यशोदालाई छोरा यमन श्रेष्ठले दागबत्ति दिएका थिए । मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा यशोदाको दाहसंस्कार गरेपछि मदनको परिवार सुनाकोठीमा रहेको निवासमा फर्कियो, जहाँ यशोदाको काजकिरिया भइरहेको छ ।
मदनकृष्णले चलिआएको १३ दिने क्रिया बस्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्ने हुनुभएको छ । यशोदा सुवेदीको काजक्रिया १३ दिन नभई ५ दिन गरिने भएको छ । पारिवारिक सल्लाहमा यो निर्णय लिइएको श्रेष्ठको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कलाकारहरु समाज परिवर्तनका संवाहक पनि हुन् । श्रेष्ठ परिवारको यो कदमले मृत्यु संस्कारको १३ दिने कर्मलाई छोटो बनाउन अभियान चलाई रहेकाहरुलाई पनि सहयोग पुर्याएको छ ।
१३ दिने मृत्यु संस्कारलाई अरुले पनि परिवर्तन गर्न यो अनुकरणीय उदाहरण बन्ने भएको छ । श्रीमतीको निधनले विक्षिप्त हुनुभएकाे मदनले मंगलबार राती भावुक हुँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नुभएकाे छ । उहाँले यशोदालाई सम्झिदै लेख्नुभएकाे छ –
सबैले माया मारेर के भो
तिमी छँदैछौ नि मलाई प्यार गर्ने
तिमीले पनि माया दिन नभ्याउँदा
आँसु छँदैछ नि मलाई स्यार गर्ने